Shirarka mucaaradka iyo Maamul goboleeyada oo wali sii socda | KEYDMEDIA ONLINE
Shirarka mucaaradka iyo Maamul goboleeyada oo wali sii socda
Madaxda Maamul Goboleedyada, Golaha Midowga Murashixiinya iyo Midowga siyaasiyiinta Gobollada waqooyi ayaa maanta ku kulmay Magaalada Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa maalintii Saddexaad galay shirka aan rasmiga ahayn ee u dhexeeya Madaxweynayaasha Maamul Goboleedyada dalka, kaas oo looga arrin sanayo sidii is fahan looga gaari lahaa is mari waaga ka taagan qabsoomidda shirka Wada tashiga qaran ee la qosheeyay inuu ka dhacayo teendhada Afisyooni.
Wada-hadalladaan oo uu gar-wadeyn ka yahay Madaxweynaha Galmudug Qoor-qoor, ayaa laga muujiyay isku soo dhawaansho, waxaana madaxda Maamullada Puntland iyo Jubbaland ka soo dabceen halkii ay ku dhaganaayeen.
Shirka maamullada, maanta waxaa ku soo biiray Guddoomiyaha Aqalka Sare, Cabdi Xaashi Cabdullaahi, iyo siyaasiyiinta Gobolada waqooyi ee uu isagu hormuudka u yahay, waxayna soo bandhigeen tabashadooda la xariirta doorashooyinka, iyo hab dhaqanka Farmaajo ee ah inuu u diiday ka qeyb galka shirarka masiirigaa h.
Dhanka kale, Golaha midowga Murashiinta ayaa maanta caasimadda kula kulmay Waliilka Midowga Afrika iyo Saraakiisha AMISOM, waxayna kala hadleen aminiga doorashooyinka iyo in ay dhex dhexaad ka ahaadaan siyaasadda dalka.
Musharixiintu, markii ay kasoo dhamaadeen kulaankii AMISOM, waxa ay ku biireen kulanka Madaxda dowlad Goboleedyada, iyagoo gudbiyay arriinta soo cusboonaatay ee la xariirta Muddo kordhinta ay karkarinayaan Guddoonka Baarlamaanka.
Ugu danbeyn, Madaxweynayaasha Dowlad Goboleed Galmudug, Hirshabelle iyo Koofur Galbeed ayaa la filayaa in ay caawa la kulmaan Farmaajo, kalana hadlaan damaciisa ku aaddan muddo kordhinta iyo qalalaasaha birri ka dhici kara Golaha Shacabka.